DF oo isku dayeysa inay hagaajiso xiriirka Masar ee u xumaaday Ethiopia darteed | Warkii.com
Home warkii DF oo isku dayeysa inay hagaajiso xiriirka Masar ee u xumaaday Ethiopia...
DF oo isku dayeysa inay hagaajiso xiriirka Masar ee u xumaaday Ethiopia darteed
Wasiiru dowlaha cusub ee madaxtooyada Soomaaliya, Mudane Xasan Macallin Khaliif ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Danjiraha dowladda Masar ee Soomaaliya, Maxamed Nasar, xili la fahamsan yahay inuu sii xumaaday xiriirka labada dal.
Sida ay ogaatay Warkii.com, kulankan ayaa looga hadlay xiriirka labada dal, iyada oo labada mas’uul isku afgarteen in lasii xoojiyo iskaashiga iyo wada-shaqeynta labada dhinac.
Danjiraha Masar ee Soomaaliya ayaa isagu dul istaagay sooyaalka wada-jirka ah ee ka dhaxeeya labada dal ee walaalaha ah, isagoona balan-qaaday in dowladda Masar ay gacan qaban doonto dowladda Soomaaliya.
Danjiraha ayaa si gaar ah sheegay in Masar ay dowladda Soomaaliya ka caawin doonto arrimaha waxbarashada, oo uu sheegay inay aasaas u tahay horumarka iyo dowlad dhiskaba.
Kulankan ayaa sidoo kale waxa ku wehlinayay danjiraha, Safiir ku-xigeenka dowladda Jarmalka, Sascha Andreas Kienzle oo uu maanta wada qaabilay wasiiru dowlaha cusub ee madaxtooyada Soomaaliya.
Safiirrada ayaa si wada-jir ah ugu hambalyeeyay xilka dhawaan loo magacaabay Wasiiru Dowlaha, iyaga oo u rajeeyeyna ka mira-dhalinta shaqooyinka qaran ee horyaalla, isla markaana u muujiyey is-garab taag.
Ugu dambeyntiina Wasiiru dowlaha Madaxtooyada ayaa uga mahad-celiyey Danjireyaasha booqashadooda, isagoona la wadaagay dadaalladda dowladda federaalka Soomaaliya ee xoojinta amniga, kobcinta dhaqaalaha iyo adeegyada aas-aasiga ah.
Waxa uu ahaa kulankii saddexaad ee dhex-maray safiirka Masar ee Soomaaliya
Shalay ayey aheyd sidoo kale markii wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Mudane Danjire Axmed Ciise Cawad, uu qaabilay safiir Mohamed Ibrahim Nasr, si loo faaqido xoojinta hababka iskaashiga iyo horumarinta xiriirka labada dhinac.
Intii lagu guda-jiray kulanka ayaa waxaa looga dooday dhowr arrimood oo muuqda oo ku saabsan xiriirka labo geesoodka ee labada dal ee walaalaha ah u dhexeeya iyo sidoo kale xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee gobolka iyo dunida inteeda kale.
Isla shalay, Wasiirka cusub ee Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka DFS Marwo Khadiija Maxamed Diiriye iyo safiirka dawladda Masar u jooga Soomaaliya ayaa kulan ay yeesheen waxa ay uga wada hadleen xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinaca gargaarka.
Kulamada ayaa imanaya xili uu sii xumanayey xiriirka Soomaaliya iyo Masar, kadib markii dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ay dhinaca saartay Itoobiya, oo si weyn isku hayaan Masar.
Wararka ayaa sheegaya in Soomaaliya ay hadda isku dayeyso inay dib u hagaajiso xiriirkaas, hase yeeshee ma cadda sida ay u maareyn doonto siyaasaddii markii horeba ku riixday dhanka Ethiopia.
Previous articleSoomaali qeyb ka ah baadi goobka dad lagu la’yahay Dhul Gariirka Turkiga
Next articleSawirro: Sheekh Shariif oo dalab hordhigay odayaasha dhaqanka beelaha HirShabelle
Xildhibaanada golaha shacabka oo ka doodayo labo arrin oo muhiim ah
Xildhibaanada golaha shacabka oo maanta kulan ku yeelan doono xaruntooda Villa Hargeysa ayaa ka doodaya labo qodob oo muhiim ah. Kulanka oo ah mid xasaasi...
Jubbaland oo dad badan u soo qab-qabtay weerar ka dhacay KISMAAYO
Ciidamo ka tirsan kuwa DF oo lagu qarxiyey duleedka Muqdisho
Baarlamaanka Itoobiya oo go’aan culus ka soo saaray xiisada gobolka Tigray-ga